Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda San Diego oo caalamka ka codsaday in gargaar dagdag ah lala gaadho Ogadenya
Jaaliyadda San Diego oo caalamka ka codsaday in gargaar dagdag ah lala gaadho Ogadenya
Jaaliyadda Ogadenya ee San Diego ayaa dhaq-dhaqaaq xoogan ka dhex wada bulshada ay la noolyihiin iyo siyaasiyiinta gobolkooda. Warqad furan oo cabasha ah oy caalamka u direen ayuu nuqul na soo gaadhsiiyay wariyaha Wakaalada.
Warqadda ay jaaliyadda qortay ayay ugu sheegeen caalamka in malaayiin qof ay u baahan yihiin Geeska Afrika gargaar dagdag ah abaaraha ku dhuftay gobolka darteed. Waxay jaaliyadda ku sheegtay warqaddan furan inuu caalamka aqoonsaday xaaladda Somaliya oo loo gurmanayo hasa ahaatee uu ku guuldareystay inuu arko dhibaatada ka sii dareysa ee ka jirta Ogadenya. Waxay sheegeen in tobonaan kun oo dadweyaha S.Ogadenya ay ka soo carareen dalkoodii oy soo galeen waqooyiga iyo badhtamaha Somaliya iyo dalka Kenya kuwaasoo u baahan gargaar insaani ah. Waxaase jirta boqolaal kun oo gudaha Ogadenya ku jira oy soo wajahday macaluul iyo cadaadiska xukuumadda Itobiya. Hasa ahaatee xayiraadda iyo cunaqabataynta Itobiya ee sharcidarada ah darteed aanu caalamka uga warqabin xaaladda dhabta ah ee ka jirta Ogadenya. Waxay Itobiya xayiraada u saartey Ogadenya waa si aan loo ogaanin xadgudubka xuquuqul Insaanka ay ka wado gobolka iyo xasuuqa ay ceedamadeeda ay ku hayaan dadka shacabka ah. Waxaa intaa dheer sida ay ku qoreen jaaliyadda warqadooda maleesiyaad ay Itobiya maalgalisay oo loo yaqaano –Liyuu Police- kuwaasoo u dhaqma sidii jaanjaweedkii oo dadka shacabka ah si aabayeel la’aan ah u leynaya.
Xadgudubyada ka jira Ogadenya oo ah mid baahsan waxaa ka mid ah kufsi xad dhaaf ah, jidh-dil, xabsi iyo layn aan loo aabayeelin iyo baabi’in tuulooyinka iwm.
Xidhitaankii labada wariye ee Swedish-ka ahaa – Martin Schibbye and Johan Persson – waxay tusaale u yihiin ololaha xasuuqa qarsoon ah ee Itobiya ay ka wado Ogadenya oo aanay doonaynin inuu caalamka ogaado.
Ugu dambayn waxay jaaliyadda San Diego ka codsanayaan caalamka in gargaar dagdag ah loo fidiyo dadka shacabka ah ee Ogadenya ku tabaalaysan. Waxay kaloo dawladaha deeqda bixiya iyo ururada aan xukuumiga ahayn (NGO,s) iyo Golaha Amniga ee QM in lagu qasbo Itobiya inay u ogolaato haya’adaha samafalka inay gargaar dagdag ah gaadhsiiyaan dadka shacabka ah eek u tabaalaysan Ogadenya. Waxay ka codsanayaan caalamka iyo dawladda mareykanka in Ogaadeenya loogu gurmado sida loogu gurmaday Somaliya oo gargaar dagdag ah lala gaadho shacabka.
-Jaaliyadda S.Ogadenya ee San Diego.
aad ayay u mahadsanyihiin, waa tallaabo wanaagsan.